7 Socod Shaqo oo Atoomaati ah oo Wax ka bedeli doona Ciyaarta Suuqgeyntaada | Martech Zone
Suuqgeyntu waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah qof kasta. Waa inaad baartaa macaamiisha bartilmaameedka ah, ku xidhid iyaga goobo kala duwan, kor u qaad alaabtaada, ka dibna la soco ilaa aad xidhayso iibka. Dhammaadka maalinta, waxaad dareemi kartaa inaad orday maaratoon.
Laakin ma aha in ay noqoto mid xad dhaaf ah, si fudud hab-raacyada u toosi.
Automation-ku waxa uu ka caawiyaa ganacsiyada waaweyn in ay la socdaan dalabaadka macmiilka iyo ganacsiyada yaryar in ay noqdaan kuwo khuseeya oo tartamaya. Markaa, haddii aadan qaadan automation marketing, hadda waa waqtigii. U ogolow software-ka otomaatiga ahi inuu daryeesho hawlaha waqti-qaadka ah si aad diiradda u saarto hawlaha muhiimka ah.
Waa maxay Automation-ka Suuqgeynta?
Automation-ka suuqgeyntu waxay ka dhigan tahay adeegsiga softiweerka si loo toosiyo dhaqdhaqaaqyada suuqgeynta. Hawlo badan oo soo noqnoqda oo suuq-geyneed ayaa si toos ah loo samayn karaa: dhajinta warbaahinta bulshada, suuq-geynta iimaylka, ololaha xayaysiiska, iyo xitaa ololeyaasha dhibicda.
Marka hawlaha suuqgeyntu ay si toos ah u shaqeeyaan, waaxda suuqgeyntu waxay u shaqeysaa si hufan oo suuqgeyneedyadu waxay siin karaan macaamiisha khibrad shakhsi ahaaneed. Automation-ka suuqgeyntu wuxuu horseedaa hoos u dhac ku yimaadda kharashaadka, wax soo saarka sare, iyo iibka oo kordha. Waxay kaloo awood kuu siinaysaa inaad ganacsigaaga ku kobciso kheyraad yar.
Halkan waxaa ah tirokoobyo muhiim ah oo ku saabsan automation marketing.
75% Shirkadaha oo dhan waxay qaateen automation marketing
websites 480,000 hadda isticmaal tignoolajiyada automation marketing
63% suuqyada u qorsheeyaan in ay kordhiyaan miisaaniyadooda otomaatiga ah ee suuq geynta
91% Suuqgeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in suuqgeynta suuqgeynta ay kor u qaaddo guusha ololayaasha suuq-geynta ee internetka
Hirgelinta automation-ka suuqgeyntu waxay horseedaysaa 451% korodhka hogaaminta tayada leh-celcelis ahaan
Markaad si otomaatig ah u sameyso suuq-geynta, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si gaar ah u beegsato macaamiisha, miisaaniyada suuqgeyneedna waxaa loo istcimaalaa si xikmad iyo hufnaan leh. Automation-ka suuqgeyntu wuxuu u shaqeeyaa ganacsi kasta, oo halkan waxaa ah hababka suuq-geynta qaarkood oo si toos ah loogu adeegsan karo qalabka socodka shaqada.
Socodka Shaqada 1: Automation Korinta Hogaaminta
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, 50% ka mid ah hogaanka aad dhaliso waa kuwo u qalma, kaliya diyaar uma aha inay wax iibsadaan. Waxaa laga yaabaa inay ku faraxsan yihiin inaad aqoonsan karto dhibcahooda xanuunka oo aad u furan tahay inaad hesho macluumaad dheeraad ah. Laakiin diyaar uma aha inay kaa iibsadaan. Dhab ahaantii, kaliya 25% ee hogaanka ayaa diyaar u ah inay iibsadaan alaabtaada wakhti kasta, taasina waa rajo.
Waxaa laga yaabaa inaad hogaanka ku heshay foomamka ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee internetka, raadinta iibka, ama kooxdaada iibka ayaa kaarar ganacsi ka helay bandhig ganacsi. Waxaa jira siyaabo badan oo loo abuuro hoggaan, laakiin waa tan: sababtoo ah dadku waxay ku siiyeen macluumaadkooda macnaheedu maaha inay diyaar u yihiin inay ku siiyaan lacagtooda.
Waxa hogaamiyayaashu rabaan waa xog. Ma rabaan inay ku siiyaan lacagtooda ka hor intaanay diyaar u ahayn. Marka, waxa ugu dambeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad u sheegtaa, "Hey shirkadeena waxay leedahay badeecooyin wanaagsan, maxaad u iibsan weyday qaar!"
Kobcinta rasaasta tooska ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku dhex dhaqaaqdo hogaanka socdaalka iibsadaha si xawligooda ah. Waxaad la falgashaa iyaga, kasbato kalsoonidooda, suuq geyso alaabtaada, ka dibna xir iibinta. Automation-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad horumariso oo aad ilaaliso xidhiidhada rajada iyo hogaaminta iyada oo aan la helin dadaal suuqgeyn xoog leh. Waxaad la falgashaa rajada iyo macaamiisha marxalad kasta oo socdaalkooda wax iibsiga.
Socodka shaqada 2: Automation Marketing Email
Suuqgeynta iimaylka waxa ay ka caawisaa suuqgeynayaasha in ay dhistaan ​​xiriirka rajada, hogaaminta, macaamiisha jira, iyo xitaa macaamiishii hore. Waxay kuu abuurtaa fursad aad si toos ah ula hadasho iyaga wakhtiga ku habboon.
Tirada isticmaalayaasha iimaylka ayaa lagu qiyaasaa inay gaadhaan 4.6 bilyan markay tahay 2025. Isticmaalayaal badan oo iimaylo ah, way fududahay in la arko sababta soo noqoshada maalgashiga suuqgeynta iimaylka ay u weyn tahay. Daraasaduhu waxay muujiyeen in $1 kasta oo lagu kharash gareeyo suuqgeynta iimaylka, celceliska soo celinta waa $42.
Laakin suuqgeynta iimaylka wuxuu dareemi karaa waqti lumis sababtoo ah waxaa jira wax badan oo la sameeyo: raadi rajooyinka, la falgalka iyaga, suuq geyn alaabtaada, dir iimaylka, iyo dabagal. Automation-ku wuxuu halkan ku caawin karaa adoo toosiya hawlaha soo noqnoqda ee la xidhiidha maaraynta xidhiidhka macaamilka, samaynta suuq-geynta iimaylka mid hufan.
Qalabka suuq-geynta iimaylka ayaa soo diri kara macaamiisheeda farriimaha la xiriira, la gaaryeelay, iyo waqtiga ku habboon. Waxay ka shaqeysaa gadaal, taasoo kuu ogolaaneysa inaad ka shaqeyso hawlo kale oo qiimo leh. Waxaad u diri kartaa iimaylo gaar ah shaqsi kasta, laga bilaabo booqdayaasha cusub ilaa iibsadayaasha ku celiska ah.
aalada 3: Qalabaynta Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Waxaa jira 3.78 bilyan oo isticmaale baraha bulshada adduunka oo dhan, badankooduna waxay ku qaataan 25 daqiiqo ilaa 2 saacadood maalin kasta baraha bulshada. Taasi waa sababta suuqley badan ay u isticmaalaan warbaahinta bulshada si ay u suuq geeyaan shirkadahooda.
Markaad la macaamilayso macaamiisha iyo rajada laga qabo warbaahinta bulshada, waxaad la hadli kartaa iyaga wakhtiga dhabta ah oo waxaad heli kartaa jawaab celintooda. Ku dhawaad ​​kala badh macaamiisha Maraykanka ayaa isticmaala warbaahinta bulshada si ay wax uga weydiiyaan alaabada iyo adeegyada, markaa joogitaanka warbaahinta bulshada ee xooggan waa mid aad muhiim u ah.
Laakiin suurtagal maaha in maalinta oo dhan lagu qaato baraha bulshada, waana meesha ay ka soo gasho automation-ka Qaar ka mid ah qalabka iswada ayaa xitaa qori kara qoraallada warbaahinta bulshada.
Automation-ka suuq-geynta warbaahinta bulshada waxa ay fasaxaysaa wakhtigaaga, waxa ay awood kuu siinaysaa in aad la falgasho kuwa raacsan oo aad qabato wada sheekaysi dhab ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa warbixinnada la soo saaray si aad u qorsheyso waxa la dhejiyo iyo goorta.
aalada 4: SEM & Maamulka SEO
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay tobanaan ama boqolaal tartame, waana sababta ay muhiim u tahay in lagu xayeysiiyo makiinadaha raadinta. SEM (Suuqgeynta Matoorka Raadinta) waxay ku kori kartaa ganacsigaaga goob suuqeed tartan sii kordheysa.
SEO (Hurrinta Mashiinka Raadinta) macnaheedu waa hagaajinta boggaaga si kor loogu qaado muuqaalkeeda raadinta la xidhiidha matoorada raadinta. Mar kasta oo goobtaadu ay ku jirto natiijooyinka raadinta, waxay sare u qaadaysaa fursadahaaga soo jiidashada macaamiisha mustaqbalka iyo kuwa jira ee ganacsigaaga. SEM waxay ka faa'iidaysataa raadinta ereyada muhiimka ah ee la beegsanayo, halka SEO ay ka caawiso beddelka iyo ilaalinta hoggaanada ay dhaliyaan xeeladaha SEM.
Markaad si otomaatig ah u sameyso SEM iyo SEO, waxaad yaraynaysaa tirada shaqada gacanta ee aad u baahan tahay inaad qabato oo aad dardar geliso hawlaha adag. In kasta oo aadan si otomaatig ah u samayn karin SEM kasta iyo geeddi-socod kasta, waxaa jira hawlo aad si otomaatig ah u samayn karto si aad u kordhiso waxtarka.
Nidaamyada SEM iyo SEO ee si otomaatig ah loo samayn karo waxaa ka mid ah abuurista falanqaynta shabakadda, la socoshada calaamadaynta calaamadaha iyo xiriiriyeyaasha cusub, qorsheynta istaraatiijiyada nuxurka, falanqaynta faylasha log, istaraatijiyad ereyga muhiimka ah, iyo dhisida isku xirka. Marka SEM iyo SEO ay si taxadar leh isugu xiran yihiin, waxay soo saaraan olole suuqgeyn dhijitaal ah oo xooggan oo leh natiijooyin la dareemi karo.
Socodka Shaqada 5: Socodka Shaqo ee Suuqgeynta Maaddada
Astaan ​​kasta oo weyn waxay leedahay hal shay oo hore u sii dhaqaajiya: hodantinimo qiimo leh oo ku habboon oo ku xidha dhagaystayaasheeda. Suuqgeynta nuxurka ayaa door muhiim ah ka ciyaarta ololayaasha suuqgeynta dhijitaalka ah ee guuleysta.
Laakiin waa kan arrintu. Kaliya 54% Suuqgeeyayaasha B2B waxay isticmaalaan nuxurka si ay u dhistaan ​​daacadnimada macaamiishooda jira. Inta soo hartay kaliya isku day inaad ku guuleysato ganacsi cusub. Ha naga khaldin, ku guuleysiga ganacsiga cusub ma xuma, laakiin cilmi baaris ayaa muujisay in 71% iibsadayaasha ay damiyaan waxyaabaha u muuqda sida garoon iibka. Markaa, halkii aad wakhti badan ku bixin lahayd iibinta kuwa mustaqbalka iyo macaamiisha jira, waxa ay tahay inaad sameyso waa la qabsiga iyaga.
Qalabka suuq-geynta nuxurka ayaa otomaatig u noqon kara oo hagaajin kara hawlaha suuq-geyneed ee soo noqnoqda. Waxay kaa caawinaysaa in ay horumariso wax ku oolnimada istaraatiijiyad suuqgeyneed nuxurkaaga. Waxaad si fudud u aqoonsan kartaa isbeddellada ugu dambeeyay ee nuxurka oo aad u isticmaali kartaa aaladda abuurista fikradda.
Istaraatiijiyad suuqgeyneed oo wanaagsan, waxaad ku dhistaa kalsoonida daawadayaashaada, waxaad la xiriirtaa rajada iyo macaamiisha, waxaad dhalisaa hoggaan, oo waxaad hagaajisaa beddelka. Joogteynta nuxurku waxay ka caawisaa shirkaddaada inay noqoto mid la aamini karo, waxay dhistaa kalsoonida macaamiisha, waxayna xoojisaa sumcadda ganacsigaaga.
aalada 6: Maareynta Ololaha Suuqgeynta
Haddii shirkaddaadu ay hesho hoggaan yar oo iibku hoos u dhaco, ololaha suuqgeyntu wuxuu shaqayn karaa yaabab. Ololaha suuqgeyneed ee wanaagsan wuxuu kicin karaa xiiso cusub ganacsigaaga wuxuuna kor u qaadi karaa iibka. Si kastaba ha ahaatee, ololaha guulaysta waa inuu lahaadaa natiijooyin la qiyaasi karo - sida iibka oo kordhay ama weydiimo ganacsi oo badan.
Maareynta ololaha suuqgeyntu waxay ku lug leedahay qorshaynta taxaddarka leh iyo fulinta hawlaha loogu talagalay in lagu keeno natiijooyin ganacsi oo wanaagsan. Waxay hubisaa in ololuhu u beddelo yoolalka shirkadda oo u beddelo bartilmaameedyo la fulin karo oo la xidhiidha baahiyaha macaamiisha.
Automation-ka maareynta ololaha suuq-geynta ayaa ka dhigaysa shaqada suuq-geyneed mid fudud. Tusaale ahaan, suuqgeynuhu wuxuu si otomaatig ah u samayn karaa qulqulka rasaasta. Marka rajadu buuxiso foom, dadaalo suuqgeyneed oo isdaba joog ah ayaa la bilaabayaa. Iimayllada si toos ah ayaa loo diri karaa si kor loogu qaado xayaysiisyada, codsiga ganacsiga, ama iibinta.
aalada 7: Qorshaynta Dhacdada iyo Suuqgeynta
Dhacdada suuqgeyntu waxay si toos ah badeecad ama adeeg u qaadata rajada iyo macaamiisha jira. Waxay kaa caawin kartaa kordhinta muuqaalka summada ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib dhacdada. Dhacdadani waxay sidoo kale ka caawin kartaa shirkadda inay abuurto hoggaan iyo fursado cusub. Suuqgeeyayaashu waxay kor u qaadi karaan shey gaar ah ama sifo si ay u kordhiyaan ku qanacsanaanta macaamilka, ka-qaybgalka, iyo sii-haynta.
Laakiin dhacdo kasta oo suuqgeyneed oo guulaysata waa in si fiican loo qorsheeyaa oo loo qorsheeyo. Qalabka socodka shaqadu wuxuu u oggolaan karaa suuq-geeyayaashu inay hab-socodka oo dhan otomaatig u sameeyaan-laga bilaabo diiwaan-gelinta, dhiirrigelinta dhacdada, iyo jawaab-celinta.
Markaad dhacdooyinka u isticmaasho suuqgeyn ahaan, waxaad siisaa macaamiisha suurtagalka ah is dhexgalka gacantooda koowaad ee shirkadda oo aad ka caawiso inay ogaadaan shakhsiyaddeeda, diiradda, iyo aragtideeda.
Automation Suuqgeynta Waxay Leedahay Saamayn Wayn
Suuqa caalamiga ah, waxaa muhiim u ah ganacsigaaga inuu ka soo dhex baxo dadka badan. 80% isticmaalayaasha automation marketing ka warbixi korodhka helitaanka rasaasta, iyo ganacsiyo badan ayaa isticmaalaya tignoolajiyada si ay uga dhigaan dadaalkooda suuqgeyn mid waxtar leh. Automation-ku wuxuu kaa caawin karaa maaraynta dhinac kasta oo ka mid ah ololahaaga suuq-geyneed-bilaw ilaa dhammaad, taasoo ka dhigaysa habka oo dhan mid aan xumaan lahayn oo aan dhib lahayn.
Tags: qalabayntafariinta suuq-geynta suuqaAutomation qorshaynta dhacdadaAutomation korinta hogaankasuuq-geynta suuqatirakoobka automation marketingxisaabaadka automation marketingOlolaha suuq-geynta automationsocodka shaqada suuq geyntamaaraynta ppcAutomation marketing engine search engineAutomation optimization engine searchmaamulka hagaajinta mashiinka raadintaraadinta maamulka suuq-geyntaSheemSEOAutomation-ka suuqgeynta warbaahinta bulshadatirakoobkawaa maxay otomaatiga suuq geynta
Sida Loo Sameeyo Jadwalka Macluumaadka Suuqgeynta Fiidiyowga